SomaliaReport: Itoobiya oo Wada Hadashiinaysa ASWJ
Hoggaamiyeyaasha urur diimeedka dawladda taabacsan ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca (ASWJ) ayaa magaalada Addis Abeba u jooga wada-hadalo ay soo qabanqaabisay dawladda Etoobiya, loogana dan leeyahay xal u helidda khilaaf haddaan la soo afjarin siin kara Al-shabaab guul.
Khuburada siyaasadda lafagura ayaa aaminsan in khilaafkan oo sababay inay boqolaal dagaalyahanadooda ahi isaga yimaaddaan aagagii dagaalka kuna noqdaan magaalada Caabudwaad uu dhaawac u gaysan doono taxaalufka beesha ku dhisan ee suufiyada, kaas oo laf-dhabar u ahaa ka hortagga Al-shabaab ee gobolada dhexe iyo inay ciidamada dawladda ku meel gaadhka ahi guulo ka soo hoyaan gobolka Gedo. Muddo yar ka dib markii uu khilaafkani dibadda u soo shaac baxay ayey Al shabaab ka faa’iidaysatay isla markaana qabsatay magaalada Dhuuso-mareeb oo ahayd saldhiggii ASWJ.
Ra’iisal wasaaraha Etoobiya, Zenawi ayaa magaalada Addis Abeba ku martiqaaday Macalin Maxamuud Sheekh Xassan oo ah guddoomyaha ururka iyo Ibraahim Shekh Guureeye oo ah madaxa qaybta Caabudwaaq si ay u soo af jaraan khilaafkooda.
Sarkaal ka tirsan ASWJ ayaa u sheegay wargayska Somalia Report in kulankan oo ku eg maalinka talaadada la filayo inuu midho dhal noqdo maadaama ay dawladda Etoobiya cadaadis adag labada dhinacba ku saartay in la xaliyo khilaafka dhex yaala.
Khilaafkan ayaa waxaa keenay qaabka loo qoondeeyey saanad hub ah oo ay Etoobiya bixisay iyo awoodda hoggaanka oo ay si aan caddaalad ahayn u kaliyeystaan beesha Cayr ee ka tirsan qabiilka Hawiyaha.
ASWJ ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay gacan saar la leedahay dawladda Etoobiya oo labadii sano ee ay dalka Soomaaliya qabsatay hurisay dhalashada ururka Al-shabaab. Xoogga geeska Afrika ayaa iyadu isaga huleeshay dalka sanadkii 2009-kii balse inta badan lagu eedeeyaa inay soo gudubto xuduudda labada dal. Xukuumadda Etoobiya oo walwal ka qabta islaamiyiinta asal-raaca ah iyo dabool ku haynta gobolka Soomaalidu degto ee dalkeeda ayaa waxay tababaro u furtay kumanaan Soomaali ah si ay u garab istaagaan dawladda itaalka daran ee ku meel gaadhka ah.